Sheekh Caan ah oo ku baaqay in Wadamada Islaamka sameestaan ciidamo u gaar ah | Salaan Media
Home Wararka Sheekh Caan ah oo ku baaqay in Wadamada Islaamka sameestaan ciidamo u...
Sheekh Caan ah oo ku baaqay in Wadamada Islaamka sameestaan ciidamo u gaar ah
Muslimiinta kunool caalamka ayaa si weyn uga xumaaday gumaadka ciidamada Yahuuda Israa’iil ku hayaan shacabka reer Falastiin iyo weerarkii ciidamada Israaiil ka geesteen Masjidka Barakeesan ee Al Aqsaa.
Caalimka weyn ee u dhashay dalka Masar Sheekh Dr Axmed Cumar Haashim, oo khudbad xasaasi ah ka jeediyay Masjidka Al-Azhar ayaa si kulul u cambaareeyay tacadiyada ciidamada Israa’iil ka geesanayaan dhulka Falastiin.
Sheekh Dr Axmed Cumar Haashim, ayaa ku eedeeyay ciidamada yahuuda Israa’iil in ay ku xadgudbeen xurmada masjidka Al-Aqsa, waxa uuna sheegay in waxa ay sameenayaan ciidamada Israa’iil aan loo dulqaadan karin.
Caalimkan ayaana ugu baaqay wadamada Islaamka in ay hurdada ka kacaan oo sameestaan ciidamo u gaar ah oo kahor taga dhibaatooyinka iyo xaaladaha deg dega ah, waxa uuna cadeeyay in muhiim tahay in wadamada Islaamka cudud ciidan sameestaan.
“Waxaan ugu baaqayaa madaxda Carabta iyo kuwa Islaamka inay sameeyaan ciidan ka hortagga [dhibaatooyinka jira]….. Wixii xoog lagaaga qaata waxaa lagu soo ceshadaa xoog,” ayuu yiri Sheekhan mar hogaamin jiray jaamacadda Al-Azhar.
Baaqa kasoo yeeray Caalimkan reer Masar marna hogaamin jiray Jaamacada Al Azhar ayaa hadal heyn badan ka abuuray gudaha dalka Masar iyo caalamka islaamka, waxa ayna dad badan soo dhaweeyeen in wadamada Islaamka awood ciidan sameestaan oo difaaca.
Wadamada Islaamka ayaan qaadin wali wax talaabo ah oo ka dhan ah maamulka Israa’iil oo gumaadka u geesanaya shacabka reer Falastiin sidoo kale weerar ku qaaday masjidka barakeesan ee Al Aqsaa.